Amanyathelo okuba nguMyili weWebhu eyiNgcali | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ngale posi sifuna ukukubonisa ezinye amanyathelo ayimfuneko ukuba ube ngumyili wewebhu oyingcali.
1 Cacisa malunga nokuba kutheni ufuna ukuba nguMyili weWebhu
2 Funda ukwenza amaphepha ewebhu ngokukhetha ikhowudi
3 Yandisa ulwazi lwakho kude ngaphaya kwekhowudi
4 Misela abantu ekujoliswe kubo kunye neendleko zakho
5 Nyusa umsebenzi wakho kwi-intanethi
6 Yenza intanethi
7 Zimanye nemicimbi yomntu
8 Hlaziya rhoqo
Cacisa malunga nokuba kutheni ufuna ukuba nguMyili weWebhu
Ukuze ube ngumyili wewebhu oyingcali, kufuneka uzixhase ngomonde omkhulu. Ngokulinganayo kufuneka uzive ukhuthazekile kwaye ukhuthazekile Uyilo lwewebhu, ngendlela yokuba xa uphambi kwesikrini, iiyure zidlule ngokungathi yimizuzu. Sukuya kuyilo lwewebhu ukuba ufuna ngenene ukukwazi ukusebenzela ekhaya kwaye awunamdla kuyilo.
Funda ukwenza amaphepha ewebhu ngokukhetha ikhowudi
Omnye umahluko ophambili okhoyo phakathi komyili wewebhu oyingcali kunye nabaqalayo kukuba ingcali yenza iphepha lewebhu ikhowudi yokusika. Ke kuyimfuneko ukuba ufunde ukuphuhlisa iiwebhusayithi ukusuka ekuqaleni kwaye oku unokujonga ikhosi apho bakufundisa khona ukuba ungayenza njani, kuba le yingongoma ebalulekileyo yokuba ube ngumyili wewebhu yobungcali.
Yandisa ulwazi lwakho kude ngaphaya kwekhowudi
Ukuba ufuna nyani ube ngumyili wewebhu oyingcaliKuyimfuneko ukuba ungapheleli kulwazi lwakho kuphela kuyilo kunye nokusika ikhowudi, endaweni yoko kuya kufuneka ubenenkqubela phambili, kuba abathengi bewebhu abaninzi bayayiqonda into yokuba uyilo lwewebhu, uyilo lwegraphic, uphuhliso lwasemva kunye ne-SEO enye kwaye nangona imalunga ne 4 izakhono ezahlukeneyoKunokwenzeka ukuba abathengi bahlala bekucela kuyo yonke into.
Oko akuthethi ukuba wenze yonke into, nangona kunjalo, kufuneka ukhuphe onke amacandelo ongazenziyo kakuhle, nangona kubalulekile ukuba ulwazi oluthile olusisiseko malunga nenye nganye, ukuze uvavanye ngokufanelekileyo umsebenzi wabo bantu ubanike ikontrakthi. Kuba ngale ndlela ukuba awunalo ulwazi olusisiseko kwaye umntu omnike ikontrakthi akawenzi umsebenzi wakhe kakuhle, phambi komthengi, nguwe oya kwenza izinto kakuhle.
Misela abantu ekujoliswe kubo kunye neendleko zakho
Kubalulekile ukuba uzinzise loluphi udidi loluntu oziva usebenza kulo kwaye zeziphi iindleko ekufuneka bezihlawule ngomsebenzi wakho kwaye yileya into oza kuyizuza ngomsebenzi wakho iya kwahluka Ngokwentlobo yoluntu apho umsebenzi wakho ujoliswe khona kwaye ngokwasesidlangalaleni, kuyakufuneka ukuba ubonise kwaye uthengise umsebenzi wakho ngeendlela ezahlukeneyo; ukuba uyakwazi oku kwangaphambili uza kuba nethuba lokuzisindisa iiyure ezininzi zomsebenzi.
Nyusa umsebenzi wakho kwi-intanethi
Ipotifoliyo yakho akufuneki ibekho kwiwebhusayithi yakho kuphela, ekumele ukuba ube nayo njengomyili oyile wewebhu, kodwa ube nayo Kuya kufuneka uyipapashe kumaqonga ahlukeneyo apho unethuba lokufezekisa ukubonakala okukhulu.
Unako khuthaza umsebenzi wakho kokubini kumaqonga esizwe nakwamanye amazweNgale ndlela, abaphulaphuli bakho baya kwanda kwaye uya kuba nenani elikhulu labathengi.
Thatha inxaxheba ezahlukeneyo Uyilo lwewebhu kuluntu kwi-IntanethiKuba ngokwenza njalo awuzukukwazi ukufunda okuninzi kuphela ngenxa yamava abanye abayili, kodwa uya kwenza unxibelelwano olutsha apho kunokubakho intsebenziswano emininzi.
Zimanye nemicimbi yomntu
Kubalulekile ukuba sukuzenza waziwe kwi-intanethi kuphela, kodwa yenze ngendlela efanayo kwinqanaba lokujongana ubuso ngobuso, kuba amathuba amaninzi ahlala evela kuphela xa abathengi badibana nawe buqu kwaye kufuneka oko ubukho kwiintlobo ezahlukeneyo zeziganeko.
Ngaphakathi Uyilo lwewebhu Kubalulekile ukugcina usesikhathini, kuba lihlabathi eliguquka rhoqo. Kuyilo lweWebhu kuyinto eqhelekileyo kuyo yonke into ukuba ihambe ngesantya esikhawulezayo kwaye ukuba uvumela iminyaka eyi-1-2 ukuba iqhubeke ngaphandle kokuhlaziya uya kugqitywa ungasasebenzi.
Ke siyathemba ukuba enkosi kwezi ngcebiso unokuba ngumyili wewebhu obalaseleyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Amanyathelo okuba nguMyili weWebhu eyiNgcali
Iposti elungileyo kwicandelo lethiyori, kodwa ndinombuzo malunga nayo… ukuba ndifuna ukwenza oku ngendlela ebonakalayo… umzekelo, undicebisa ukuba ndifunde phi? Yintoni ebhetele ukuba ndinikezele ngobungcali kuyilo lwewebhu? (Ngaphandle kwezigidi zeeyure, ulwazi olusebenzayo)
Uyilo lweAsdeideas Madrid sitsho
Phendula kwi-Asdeideas Design eMadrid